लायन्सलाई थप उचाईमा पुर्याउन अघि बढेको छु -विशेश्वर आचार्य -
लायन्सलाई थप उचाईमा पुर्याउन अघि बढेको छु -विशेश्वर आचार्य
सेकेण्ड भाइस डिष्ट्रिक्ट गभर्नर पदका उमेद्वार
पोखरालाई आफ्नो कर्मथलो बनाएर कार्य गरिरहेका शिक्षासेवी विशेश्वर आचार्य यतिखेर लायन्स डिष्ट्रिक्ट ३२५ बि १ को द्धितिय भाइस गभर्नर बन्ने दौडमा छन् । शिक्षा संगै आचार्यले लायन्सबाट सामाजिक क्षेत्रमा गरेका कार्यहरू निकै प्रशंसनीय छ । पोखराको नोभेल एकेडेमी सहित दर्जनौं संघसंस्थामा आवद्ध आचार्यको २ वर्षपछि गभर्नर बन्ने ढोका यस वर्ष खुल्दैछ । यसका लागि अहिले द्धितिय भाइस गभर्नरमा उम्मेदवारी दिएर चुनावी प्रचार अभियानमा सक्रिय छन् । चुनावी अभियानका क्रममा आफ्नो पक्षमा देखिएको माहोलले उनी निकै उत्साहित भएका छन् । पोखरामा हुन गइरहेको लायन्स डिष्ट्रिक्ट ३२५ बि १ को आसन्न सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशबाट लायन बर्ष २०१९-२०२० का लागी सेकेण्ड भाइस डिष्ट्रिक्ट गभर्नरमा विजयी बन्नेमा आचार्य ढुक्क छन् । उनै सेकेण्ड भाइस डिष्ट्रिक्ट गभर्नर पदका उम्मेदवार लायन विशेश्वर आचार्यसंग समसामयिक विषयमा रहेर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
शिक्षा क्षेत्रमा यतिधेरै परिचित व्यक्तित्व लायन्समा किन आउनुभयो ?
मैले लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा रहेर काम गरिसकेको छु । तपाइँले भनेजस्तै शिक्षा क्षेत्रमा एक हिसावले सफल पनि छु । नोभेल एकेडेमीमार्फत शिक्षा क्षेत्रमा काम गरिरहँदा अथवा सेवा गरिरहँदा मैले धेरै उतारचढाव, उकाली–ओराली व्यहोरेको छु । योसंगै शिक्षा क्षेत्रबाट मैले धेरै अनुभव र शिक्षा समेत हासिल गरेको छु । शिक्षा पछिको मेरो अर्को रोजाई समाज सेवा क्षेत्र हो । शिक्षा क्षेत्रमा लाग्दा लाग्दै लायन्समा प्रवेश गर्न पुगें । त्यतिबेला मेरो उमेर २२ वर्षको मात्र थियो । त्यतिबेला हामीले रोज्ने क्षेत्र भनेको कि त राजनीति थियो, कि त समाजसेवा । राजनीतितर्फ मैले ध्यान दिइन । लायन्सका अगुवाहरूको सल्लाह बमोजिम नै म लायन्समा लागेको थिएँ र अहिले पनि उहाँहरूकै आग्रह, सल्लाह र सुझावलाई शिरोधार्य गर्दै अघि बढिरहेको छु । लायन्स अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विशाल सामाजिक नेटवर्क हो । लायन्सको दायरा, लायन्सले सामाजिक क्षेत्रमा खेलेको भूमिका र लायन्सले गर्न सक्ने कार्य निकै नै उच्चस्तरको भएको महसूस गरें । लायन्सका उद्देश्य, नाराप्रति म निकै प्रभावित भएँ । शिक्षाबाट शिक्षा क्षेत्रमा बटुलेको अनुभव र ज्ञानलाई लायन्समार्फत समाज र मानव सेवामा समर्पित गर्न लायन्समा लागेको हुँ । मेरो बाँकी जीवन पनि लायन्सको महासागरमा समर्पित गर्ने प्रण छ ।
गभर्नर नै बन्ने चाहना कसरी आयो ?
हेर्नुस्, लायन्समा लाग्नै गाह्रो र लागेपछि निस्कनै गाह्रो छ । म जतिबेला लायन्समा लागेको थिएँ त्यतिबेला लायन्सको यतिधेरै चर्चा र चासो थिएन । जब हामी जस्ता युवाहरू लायन्समा प्रवेश गर्यौं त्यसपछि लायन्सले नयाँ मोड र उचाइ लिन थाल्यो । लायन्सको विश्वास यति बढेर गयो कि विश्व नै तरंगित बन्न पुग्यो । नेपालकै कुरा गर्नुहुन्छ भने लायन्सको माहौल यति विघ्न बढ्यो, युवामा उत्साह यति धेरै जाग्यो कि ! लायन्सको क्रेज अझै बढ्दैछ । नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई एउटा उचाइमा पुर्यायो । नेपालमा महाभूकम्प जाँदा जनताको घाउमा पहिलो मल्हमपट्टी लगाउने काम लायन्सले नै गरेको थियो । यसले लायन्सप्रति जनताको विश्वास अझ बढेर गएको छ । लायन्समा हामी केही गर्नका लागि आएका हौं, गरिरहेका छौं र गर्छौं पनि ।
अर्को म गभर्नर बन्ने जुन कुरा छ, यो समयको परिस्थिति हो माग हो । काम गर्न पद नै चाहिन्छ भन्ने छैन तर अहिले लायन्समा मेरो आवश्यकता नै भइसकेको छ । त्यहि आवश्यकताले मलाई अगाडि डोर्याउँदै ल्याएको छ । मैले पद खोजेको होइन, पदले नै मलाई खोजिरहेको छ । लायन्समा मेरो भूमिकाप्रति धेरैको आशा, भरोषा र विश्वास पनि छ । म क्याविनेट सेक्रेटरी बन्दै गर्दा अगुवा नेताहरूले ‘विशेश्वर ! लायन्समा तिम्रो खाँचा छ । तिमी अघि बढ हामी तिमीलाई सफल बनाउन कम्मर कसेर लाग्छौं’, भन्नु भएपछि हौसला, जोस, जाँगर, उत्साह झनै बढेर आयो । लायन्समा केही गरेरै छाड्छु भन्ने अठोट पनि त्यतिबेला गरेको थिएँ । अग्रजहरूकै चाहना, सल्लाह, सुझाव अनुसार म अघि बढेको छु । आफ्ना समग्र काम धन्दा थाति राखेर मिसन र भिजन लिएर अघि बढेको छु । लायन्सलाई थप नयाँ उचाईमा पुर्याउन नेतृत्वका लागि अग्रसर भएको हुँ ।
तपाइँको पक्षमा माहोल कस्तो छ त ?
लायन साथीहरूको म प्रतिको यतिधेरै विश्वास र भरोसा देख्दा मलाई पनि निकै उत्साहित बनाएको छ । लायन अग्रज लिडर देखी धेरै क्लबका साथीहरुले मेरो पक्षमा खुलेर माहोल बनाउनु भएको छ । जब मैले क्याविनेट सेक्रेटरी भएर काम गर्ने अवसर पाएँ, माहोल त्यति बेलादेखि नै बढेको थियो । क्याविनेट सेक्रेटरी भएर काम गर्दै डिष्ट्रिक्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै परिचित गराउन सकें, डिष्ट्रिक्ट गभर्नरले ल्याउनुभएको योजनालाई मूर्तरुप दिन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरें । त्यसले डिष्ट्रिक्टका ११ हजार ५ सय लायन्स सदस्यमा ममाथि आशा, भरोषा र विश्वास निकै बढेर गयो ।
लायन्सको नेतृत्व तहमा उम्मेदवारी दिएसंगै प्रतिवद्धता अभियान लिएर जब म धवलागिरी उक्लिएँ । एक किसिमको राष्ट्रिय चुनाव नै आएको अनुभूति गरायो । लामो समय लायन्सका नेताहरूसंग भेट्न र आफ्ना कुरा राख्न नपाएका सदस्यमा उकुसमुकुस अवस्थामा रहेको मैले पाएँ । उनीहरूले मसंग साक्षात्कार गर्ने अवसर पाएसंगै निकै खुलेर कुरा गरे । म माथि निकै आशा र भरोसा पनि गरेका छन् । साथै मेरै पालामा धौलागिरीले पनि नेतृत्व तहमा चाहना गरेका छन् । आफ्नै पालामा धौलागिरीलाई नेतृत्व तहमा ल्याउने मेरो पनि चाहना थियो । उनीहरू समक्ष मैले यो प्रतिवद्धता पनि जनाएको छु । धौलागिरीका कतिपय साथीहरू मेरो साथमा बाग्लुङ, म्याग्दी र कुश्मा ३ वटै कार्यक्रम सहभागी हुनुभयो । मेरो पक्षमा माहोल सृजना गर्न खटिनुभयो । त्यसपछि म स्याङ्जा पुगें त्यहाँ पनि धौलागिरीकै जस्तै माहोल बन्यो । यस्तै, तनहूँ लमजुङ, गोर्खा, हुँदै बागमती प्रवेश गरें । बागमती क्षेत्रमा त ८० प्रतिशत भन्दा बढी साथीहरु मेरो पक्षमा खुलेरै लागेका छन । यी सबै जिल्लाका लायन सदस्यमा मैले यतिधेरै उत्साह कहिल्यै पाएको थिइन । म सबै साथीहरुप्रति कृतज्ञ पनि छु ।
तपाइँ डिष्ट्रिक्ट गभर्नर बनेपछि गर्ने कार्य योजना के–के छन त ?
सबै लायन साथीहरुको म माथीको साथ र बिस्वास देख्दा अबको २ वर्षपछि गभर्नर बन्ने निश्चित छ । लायन्सले गर्ने काम भनेको समाजसेवा तथा मानव सेवा नै हो । सरकारसंग सहकार्य गर्दै हामी भन्दा कम अवसर पाएका नागरिकको सेवा गर्ने हो । म नेतत्वका लागि अघि बढ्दै गर्दा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाटै मेघा प्रोजेक्ट ल्याउने प्रयास हुनेछ । दीगो परियोजना अन्तर्गत गरिबी निवारणका लागि भूमिका खेल्नेछु । लायन्स क्लब्स संसारको सबैभन्दा ठूलो सेवा संगठन हो । यसले मानवीय सेवा गर्छ र आफूभन्दा बढी समस्या भएका र आफूले भन्दा कम अवसर पाएकालाई सहयोग गर्ने यसको उद्देश्य हो । त्यही उद्देश्यअन्तर्गत लायन्स क्लब सञ्चालित छ । सबैको भावना समेटेर लायन्सलाई अझै माथिल्लो तहमा पुर्याउने मेरो प्रयास हुनेछ । गभर्नरहरूले ल्याउने योजनामा दिलो ज्यान दिएर पूर्ण समर्थन र सहयोग गर्नेछु । डिष्ट्रिक्टलाई सबै सदस्यले गर्व गर्ने तथा सबै अटाउने खालको संस्था बनाउनेछु । एउटा युवाले हाँकेको संस्था यस्तो सम्म हुँदोरहेछ भन्ने अनुभूति गराउने छु । रोलमोडल भएर काम गर्नेछु ।
लायन्समा चुनाव जित्न पूर्व गभर्नरहरूको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । के सबै पूर्व गभर्नरको सहयोग यहाँलाई हुन्छ ?
ठीक कुरा उठाउनुभयो । चुनावमा पूर्व गभर्नरहरू भूमिका नै रोलमोडलको रुपमा हुन्छ । जे जसरी भए पनि उहाँहरूले लायन्स हाक्नुभएको हो । अझै पनि उहाँहरूको सहयोग विना लायन्स अघि बढ्नै सक्दैन । उहाँहरूकै सल्लाह, सुझाव र निर्देशन अनुसार नयाँ गभर्नरले लायन्स हाँक्ने हो । अब पूर्व गभर्नरले मलाई सघाउने कुरा छ, अवश्य सघाउनुहुनेछ । म उहाँहरूको राय सल्लाह, सुझाव बिना एक कदम पनि अघि बढेको छैन । उहाँहरूले नै विशेश्वरको पालो आयो, अब अघि बढ्नुपर्छ भने अनुसार नै म अघि बढेको हुँ । उहाँहरूले यसपटक अघि नबढ भन्नुभएको भए म अघि सर्दैनथें । मलाई आशा छ, तीन तिहाई पूर्व गभर्नर सावहरूको सहयोग मलाई हुनेछ । म आफ्नो एजेण्डा र पूर्वजलाई सम्मान गर्दै अघि बढेको छु । म दिनका लागि लायनिजममा लागेको हो । सहमतिको प्रयास भईनै रहला । तर पनि म पूर्व गर्भनरहरुको विवेकशील निर्णयलाई मान्न तयार छु ।
यसअघिका गभर्नरहरूले फरक–फरक मुद्धालाई प्रमुख बनाएर अघि बढ्नुभयो । तपाइँ गभर्नर बन्दै गर्दा के हुन्छ ?
समृद्धि र स्वरोजगार प्रमुख विषय नै मेरो एजेण्डा हो । लायननिजममा लाग्नुको अर्थ कुनै कुराको प्राप्तिका लागि हो भने त्यो आत्म सन्तुष्टि नै हो । जसलाई अरुको सेवाबाट आत्मसन्तोष मिल्छ त्यो व्यक्ति नै लायनिजममा लाग्ने हो । हामीले अब कनिका छरेजस्तो गरेर गर्ने कामलाई निरुत्साहित गरेर समाजले देख्ने गरी काम गर्न जरुरी छ । समृद्ध नेपालको सपना अगाडि बढिरहँदा लायननिजमा लाग्नेहरु पनि अब समृद्धिको बारेमा लाग्नुपर्छ । म पनि यो देशमा सधंै गरिवी भोकमरी रहोस् भन्ने सोच्दिन । त्यसैले अब लायनवादमा लाग्नेहरुले पनि यस विषयमा सोच्नुपर्ने हुन्छ । ४२ वर्षे ठिटो एक सय वर्षसम्म चलेको चलनलाई पूरै परिमार्जन गर्न त सम्भव नहोला । यो त हाम्रो सोचमा भर पर्ने कुरा हो।
अन्त्यमा भन्नु पर्ने केही छ की ?
समाजमा रहेर जबसम्म एकले अर्काको अस्तित्व स्विकार गर्न सकिँदैन तबसम्म हामीले चाहेको र गर्न खोजेको काममा पूर्ण सफलता प्राप्त गर्न सकिंदैन । म कसरी देखिने गरी काम गर्न सक्छु भन्ने विषयमा बिगतबाटै योजना बनाएर अगाडि बढेको छु । समाजलाई अब सक्षम नेतृत्व चाहिएको छ । बेरोजगार कम गर्ने र उद्यमशिलताको विकास गर्ने क्षमतावान् युवा सोचको मान्छे चाहिएको छ । १९९८ जूलाई ३१ मा पोखराकै छैटौं क्लबको रुपमा स्थापित लायन्स क्लब अफ पोखरा सेन्ट्रलको सदस्यको रुपमा क्लबमा प्रवेश गरेको हुँ । अनि क्लबको सदस्य, सह–सचिव, पि.आर.ओ., तृतीय उपाध्यक्ष, द्धितीय उपाध्यक्ष हुँदै लायन वर्ष २००६-००७ को क्लब अध्यक्ष भए । लायनिजमको अभियानमा डिष्ट्रिकको जोन चेयर पर्सन, रिजन चेयर पर्सन, कमिटी चियर पर्सन, चिफ एम्बेस्डर अफ गभर्नर, कोचिफ एडभाइजर हुँदै लायन वर्ष २०१५-१६ को डिष्ट्रिक्ट क्याविनेट सेक्रेटरीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पुरा गरिसकेको छु ।
सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै नेपालमा उद्यमशिलताको विकास र प्रवद्र्धन गर्न स्थापित नोभेल युनुस सेन्टरको अध्यक्ष, नोभेल फाउन्डेसनको उपाध्यक्ष र पोखरा जेसिसको अध्यक्ष समेत भई काम गरेको अनुभवले अहिलेको आकाँक्षी पदलाई स्थापित गर्न सक्नेमा म बिश्वस्त छु । पढाई र समाजसेवा भनेको मेरो जीवनमा पर्याय जस्तै हुन् । त्यसैले मैले एमबीबीएसम्म अध्ययन सँगसँगै मेल्भिक जोन फेलो डोनर र नेपाल लायन्स फाउण्डेशनको प्लाटिनम लिड डोनर समेत भएर काम गरे भने टियू लायन्स ब्लड बैंकका संस्थापक सदस्य भएर पनि आफूलाई समाजको अंगको रुपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छु । लायन वर्ष २०१५-१६ मा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा स्टयान्डर्ड ग्रान्ट अन्तर्गत मुटुरोग उपचार केन्द्र स्थापनका लागि १ लाख डलर प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा होस् वा लायन वर्ष २०१६-१७ मा लेखनाथ लायन्स अस्पतालमा १ करोड ५० लाखको लागतमा मातृशिशु कक्षा स्थापना गर्न प्रोजेक्ट चियरपर्सनको रुपमा गरेको छु । यसमा कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न सक्दैनन् । अन्त्यमा फेरी भन्छु म दिनका लागि लायनवादमा होमिएको हो । हामीमा खुला प्रतिस्पर्धा हुने कुरालाई सकारात्मक रुपमै लिएको छु । सेवा गर्ने संस्थामा नेतृत्व लिदै गर्दा प्रतिस्पर्धा नभएको भए बेश हुन्थ्यो । जे होस यो निर्वाचन अभियानमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सहयोग गर्ने सबैप्रति कृतज्ञ छु । तपाईहरुले यो पटक मलाई अमुल्य भोट दिई न्याय गर्नुहुनेछ भन्नेमा बिश्वस्त छु ।
चीनबाट उद्धार गरिएका नागरिकमाथि युक्रेनमा ढुंगा प्रहार
कोरोनाभाइरसले आक्रान्त बनेको देश चीनबाट उद्धार गरेर फर्काइएका युक्रेनी नागरिकमाथि स्वदेशमै ढुंगा…
नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ
नेपाल अचम्मको देश छ । हाम्रो शासन व्यवस्था जति लोकतान्त्रिक भनिए पनि…
प्रधानाध्यापकसहित ८ जुवाडे पक्राउ
सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसहित झापाको गौरादह नगरपालिकाबाट प्रहरीले आठ जनालाई जुवा खेलिरहेको अवस्थामा…
भारतमा बन्धक बनाइएका २ युवतीको उद्धार
बिगत ६ महिनादेखि भारतमा बन्धक बनाई राखिएका दुई नेपाली युवतीको उद्धार गरिएको…
सुनको भाउ आकासिने क्रम जारी
नेपाली बजारमा सुनको भाउ हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । बिहीबारको तुलनामा…
अवैध चल्लासहित ट्रक नियन्त्रणमा
प्रहरीको गस्ती टोलीले अवैध कुखुराको चल्लासहित मिनीट्रक नियन्त्रणमा लिएको छ । इलाका…
यौन दुर्व्यवहार आरोपमा प्रधानाध्यापक पक्राउ
पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका–१ स्थित सिद्धेश्वरी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले १४ वर्षीया छात्रालाई यौन…
शुक्रबारबाट ‘यो कस्तो महाभारत’
शुक्रबारबाट पोखरामा मञ्चन हुने नाटक ‘यो कस्तो महाभारत’को मञ्चन तयारी पूरा भएको…
मुस्ताङमा जिल्ला स्तरीय पूर्ण खोप समन्वय समिति गठन
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मुस्ताङले बिहिबार जिल्ला स्तरीय पूर्ण खोप समन्वय समिति गठन…